Setlọ ọrụ Ndebanye aha Canton nke edobere na họtelu họpụtara
N'okpuru bụ Canton Fair họpụtara ụlọ nkwari akụ guzobere ụlọ ọrụ ndebanye aha. Akwụkwọ a nkwari akụ nso Canton Fair ma ọ bụ nso ndị a hotels ga ngwa ngwa nweta asịda baajị.
1. Dong Fang .lọ nkwari akụ, 2. Baiyun nkwari akụ, 3. Jianguo nkwari akụ Guangzhou, 4. Ụlọ nkwari akụ Grand International, 5. Crowne Plaza Foshan, 6. Royallọ nkwari akụ Royal Mediterranean, 7. Westin Guangzhou, 8. Enilọ nkwari akụ Phoenix City 9. Guangzhou, 10. Allọ nkwari akụ Regal (Dongguan), 11. Ndị Westin Pazhou, 12. Soluxe nkwari akụ Guangzhou, 13. Obodo Crowne Plaza Guangzhou, 13. Guangzhou Marriott nkwari akụ Tianhe, 15. Asia International Hotel, 16. Isi ihe anọ sitere n'aka Sheraton Dongpu-Guangzhou, 17. Ulllọ nkwari akụ Pullman Baiyun, 18. Sofitel Foshan nkwari akụ, 19. Shangri-La Hotel Guangzhou, 20. Sofitel Guangzhou Sunrich, 21. Ụlọ nkwari akụ Landant Canton
22. Hotel nkwari akụ, 23. Edalọ nkwari akụ Rosedale Guangzhou, 24. Nkwari akụ Panyu, 25. Guangzhou Ocean Hotel, 26. Obodo Ramada Plaza Guangzhou, 27. Ramada Pearl nkwari akụ Guangzhou, 28. Plaza Mayors nke China
Oge ndebanye aha Canton Fair nke ụlọ nkwari akụ ndị a:
Apr / Ọkt. 16–17, 8: 30–18: 00
Anyị na-atụ aro ka ị nọrọ n'ụlọ ndebanye ndebanye aha asatọ anyị kwenyere nke ọma:
Shangri-La Hotel Guangzhou bụ ụlọ nkwari akụ kachasị mma maka ndị ọbịa Canton Fair.
Ndị Westin Pazhou dị n'ime Canton Fair ma na-agba ọsọ site na Canton Fair.
Pullman Baiyun Ọdụ enweta akara Canton Fair mgbe ị rutere n'Ọdụ.
Soluxe nkwari akụ Guangzhou bụ Kacha ọhụrụ nkwari akụ 5-kpakpando dị nso na Canton Fair.
Isi ihe anọ site n'aka Sheraton Dongpu bụ nke kachasị ọnụ ahịa ụlọ nkwari akụ 5 dị nso na Canton Fair.
Westin Guangzhou kacha mma maka onye ọbịa Hong Kong - Guangzhou Train ọbịa.
Royallọ nkwari akụ Royal Mediterranean bụ ezigbo ego na CBD.
Ụlọ nkwari akụ Landant Canton, ahịa ahịa ahịa gburugburu anyị.
... na nkwari akụ niile gburugburu Canton Fair.
Aro site na nzube:
Ije Ije gaa Canton Fair: Ebe Langham, Westin Pazhou
Okomoko kachasị mma adịghị anya na Canton Fair: Ngosipụta Mgbasa InterContinental, Uxlọ oriri na ọ Hotelụ Solụ Soluxe
Obodo / Shoppingzụ ahịa nke Guangzhou: Marriott Tianhe , Ọ bụ Sheraton Guangzhou, Oge anọ Guangzhou
Onye njem nleta gaa Obodo Ochie nke Guangzhou: Nkwari akụ Guangdong, Ezumike njem Guangzhou Shifu
Anọ m n'ụlọ nkwari akụ na-adịghị na ndepụta 'Ndebanye aha Hotel' gị. Enwere m ike ịga ụlọ nkwari akụ ndebanye aha ma debanye aha maka Canton Fair?
Ationgbọ njem gaa Canton Fair?
Enwere m ike ịdebanye aha na họtel ahụ mgbe m bịarutere?
Uzo ahia ahia di iche
Kedụ ka m ga-esi nweta baajị Canton Fair?
Kedu obodo Canton Fair? Kedu ihe kpatara aha "Canton Fair"?
Kedu ihe dị iche na 3 frasi nke Canton Fair？
Etu esi ewere iku onye ntụgharị okwu?
Kedu na Kedu ọrụ mgbagharị ụlọ nkwari akụ na-arụ ọrụ?